About | Erayo Jaceyl
About Erayo Jaceyl
Haye Maxaa halkaan ka socdo?
Farxad beey inoo tahay in aad soo heshay boggeena
Halkaan waxaad ku baran doontaaa:
Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh oo aad ku kasban karto qofka aad jeceshahay.
Erayo Xikmad leh
Geeraar Jaceyl ah oo qalbiga taabanayo
Sheekooyin cajiib ah oo ku farxadgelinayo
Soo jiidashada qalbiga: Sida gabar walbaa ama wiil kastaaa aad ku hanan karto qalbigeeda/qalbigiisa.
Jaceyl: Waa maxay jaceyl, sidee ku ogaan karto jaceylka dhabta ah?
Sawiro Jaceyl ah oo xul ah kuwaasoo isugu jira romantic ah iyo kuwo xikmadeysan
Nolosha Qoyska: Wax walbaa oo ku saabsan nolosha
Halkaan kuma baran doontid inta aan kor ku soo xusay oo keliya ee waxaad ku baran doontaa wax walbaa oo ku saabsan jaceyl.
Tusaale waxaad jaceyl u qaaday gabar/wiil, waxaad rabtaa inaad u dirto fariin jaceyl oo macaan ah misana qalbiga taabanayo, hadaba waxaa timid halka aad ka baran laheyd sida loo qoro fariimo jaceyl ah oo soo jiidasho leh.
Ma jiraa wax ka farxad badan markaad subaxdii soo toosto oo aad fiiriso telkaaga misana aad ku aragto sms jaceyl ah oo kaaga yimid lamaanahaaga, ereyadaasina ay ahaayeen eryo jaceyl ah oo soo jiidasho leh sida erayadaan oo kale:
In aad jeclaato qof caado ahaan waa dareen fiican oo weliba qurux badan, haddii qofkaasina dareen lamid ah kaaga kuu qaado waa kan ugu fiican.
Maxaa ka qurux badan in aad dhadhamiso jaceylka dhabta ah oo weliba farxadi ku dheehan tahay?
Jawaabta macquul ah waa: Maya.
Dad badani waxa ay baahi u qabaan in ay helaan jaceyl dhab ah laakin waxaa ku adag calaamadaha lagu garto jaceylka dhabta ah iyo macnahiisu. Qof walbaa oo jaceyl haleelay wuu yaqaanaa dareenka quruxda badan ee uu leeyahay jaceylku, hadii aad weydiisana jaceyl waxa uu yahay waxa ay kuugu jawaabayaan:
Jaceylku waa naxariis, waa dareen aad u qurux badan.
Jaceylku waa rabitaan weyn oo soo jiidasho, ka helitaan iyo xushmadna ay ku dheehan tahay.
Jaceylku waa dareen la isla sido qofba qofka kale dhankiisa ka daadihiyo
Jaceylku ma ahan mid lagu qeexi karo ama lagu sifeyn karo hal qoraal, hadii aad rabto in aad ogaato macnaha dhabta ah uu jaceylku yahay, waxaad ka baran kartaa halkaan. Waa Maxay Jaceyl?
Gabdhaha iyo Wiilasha guurka kadib waxaa inta badan ku adag nolosha qoyska sida raaxada guurka.
Tusaale waxaad arkeysaa dumar fara badan oo aanan aqoonin raaxada ninka, erayada raga ay jecelyihiin, waxa uu jecelyahay ninka iyo waxa uu neceb yahay taasna waxa ay caqabad weyn ku noqon kartaa nolosha qoyska.
Haddii aad dumarkaasi kamid tahay, tijaabi erayadaaan oo udir ninkaaga xiliga uu guriga ka maqan yahay adigaaba ERAYOJACEYL.COM uga mahadcelin doonto baahida ay kaa haqabtireen.
Waxaad arkeysaa wiil aanan aqoonin Sida loo kasbadao dumarka ama loo xado qalbigooda, waaana sababta niman fara badani ay single u yihiin, Dumarka intooda badan uma baahno in aad lacag leedahay, in aad qurux badan tahay balse waxa ay u baahan yihiin nin hayo furaha qalbigeeda.
Ka waran haddii aad heyso furaha gurigiina adiga keliya, ma furi karaaa qof kale?
Jawaabta macquulka ah waaa: MAYA.
Dumarkuna waa sidaas oo kale, Waxa ay rabaan nin qalbiga dago misana siiyo dhadhanka uu leeyahay jaceylka dhabta ah.
ERAYOJACEYL.COM waa warqaad ka duwan warqaadyada kale?
Guud ahaan mid ka duwan warqaadyada kale!
Waxaad ka heleysaa wax walbaa oo ku farxadgeliyo, waxa aan halkaan ku qorno waa kuwo aan anagu tijaabinay, kuna saleysan waayo aragnimo.
Waxaad arkay dad fara badan oo kaaga sheekeynayo shukaansi, erayo jaceyl, nolosha guurka balse iyaguba maba yaqaanaan sida qalbiga loo soo jiito, intooda badanne waaba single.
Waxaas oo kale maxaan dhahnaa?
Maya Maya Maya! *Kama helin Website noocaas*
Sidaa darteed baan u aas aasnay erayojaceyl.com. Halkani waxaan kugu tusi doonaa sida dhabta ah ee qalbiga qofka aad jeceshahay ku soo jiidan karto.
Waa kuma erayojaceyl.com?
​Malaha hadda waxaad isweydiisay, waxaan aan xaqiiqdu nahay?
Sababta aan anagu aaminaad kuugu hadiyadeyneyno?
Waxaan aas aasnay bogga ugu shacbiyada badan ee afka Soomaaliga ku baxo, akhristayaasheenu waxaan ka haqabtirnay wax walbaa oo nolosha, Farxada iyo Jaceylka ku saabsan.
Maxay yiraahdaan akhristayaasheenu?
Horay u socdaaa bahda erayojaceyl.com, waxaad naga haqabtirteen baahiyo fara badan oo aan idinka la,aantii aysan suurto gal aheyn in aan guul ka gaarno.
Waxa ugu horeeyo ee aan kugu dhiiro gelineyno ayaa ah in aad noqoto akhristayaasheena kuwa ugu horeeyo ee akhrista erayada cajiibka ah ee aan marwalbaa u diyaarino.
Halkani waxaad ku baran doontaa taako taako sida qalbiga gabadha/wiilka loo xado.
Fariimo Jaceyl ah oo qalbiga taabanayo
Geeraar Jaceyl ah oo soo jiidasho leh
La soco erayojaceyl.com oo noqo qofka ugu horeeyo ee aan ka haqabtirno baahida erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh.